वातावरण - हरियो अक्षय | हरियो नवीकरणीय (पृष्ठ २)
चट्टानहरू र समुद्री किनारमा किन विशाल चट्टानहरू छन्?
यस पोष्टले अनुसन्धानको बारेमा कुरा गरेको छ कि किन किन समुद्र किन बीचमा वा चट्टानहरु को शीर्ष मा विशाल चट्टानहरु छन् भनेर स्पष्ट गर्दछ। के तपाई यसको बारेमा जान्न चाहानुहुन्छ?
पोर्चुगलको जंगलहरूको पुनर्वासको लागि सहयोगीको रूपमा जय
यस पोष्टले मोन्टिसले पोर्चुगलको जलेको जंगल पुनर्निर्माणको लागि जयलाई सहयोगीको रूपमा प्रयोग गर्ने पहलको बारेमा बताएको छ।
२०१ threatened मा खतरा प्रजातिहरूको संख्याले नयाँ रेकर्ड तोड्यो
यस पोष्टमा, पछिल्लो बर्षको सम्मानका साथ खतरा भएका प्रजातिहरूको विश्लेषण गरिएको छ। के तपाई यो संख्या कति बढेको जान्न चाहानुहुन्छ?
महासागरहरू पहिलेभन्दा झन् गिरेका छन्
यस पोष्टले ठूलो गिरावटको बारेमा कुरा गरेको छ कि विश्वको महासागरहरू मानिसजातिको प्रभावबाट ग्रस्त छन्। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
यो पोस्टमा हामी उनीहरूको बाँच्नको लागि जंगलमा जीवित प्राणीहरू बीचको अन्तर्क्रियाको महत्त्वको बारेमा कुरा गर्न जानेछौं। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
यो पोष्टले २०१ 2017 मा स्पेनमा कागज र कार्डबोर्डको रिसाइक्लि inमा भएको वृद्धि र के अपेक्षित छ भनेर डाटा प्रतिबिम्बित गर्दछ। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
माहुरी र यसको प्रभावमा मौसम परिवर्तनको असर
मौसम परिवर्तनले माहुरीको अस्तित्वलाई असर गरिरहेको छ। यसको फलस्वरूप स्पेनको कृषिलाई नै खतरामा पार्छ। तपाई अझ बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
पर्यावरणविदहरुका गुनासोहरुमा नतिजा छ
यस पोष्टमा हामी वातावरणीय प्रदर्शनको निर्माणमा रहेका प्रतिक्रयाहरूका केही उदाहरणहरू हेर्नेछौं। के तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि उनीहरू साँच्चिकै काम गर्छन्?
अधिक स्थिरता अमेजन को नोक्सान रोक्न को लागी
अमेजन सबै आर्थिक गतिविधिहरु बाट ठूलो दबावमा छ कि यसको ईकोसिस्टमहरु नष्ट। कसरी टिकाउ प्राप्त हुन्छ?
ग्रहले कोरल चट्टानको आधा हिस्सा गुमाएको छ
संयुक्त राष्ट्रले चेताउनी दियो कि सारा संसारले आफ्नो कोरल चट्टानको आधा भाग गुमाइसकेको छ। यसले कस्तो नतिजा ल्याउँछ?
ट्रम्पले आर्कटिक तेलको शोषण गर्ने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरे
संयुक्त राज्यका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एउटा विधेयकमा हस्ताक्षर गरेका छन जसले आर्कटिक तेलको शोषण गर्न सकोस्। यो पूरा गरिनेछ?
ग्रहको लागि पानी चक्रको महत्व
यहाँ पानी चक्र के हो, यसको मुख्य चरणहरू र यसको ग्रहमा कस्तो महत्व छ जान्नको लागि प्रविष्ट गर्नुहोस्। के तपाईं पानीको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
होन्डर परियोजना र हाम्रो जीवनमा सामग्रीको नतीजा
दुर्भाग्यवश सामग्रीहरू जस्तै प्लास्टिक वा धातुहरूले हाम्रो महासागरहरू नष्ट गर्दैछन्। होन्डर २०2050० जस्ता परियोजनाले यसबाट बच्न मानिसहरूलाई शिक्षित बनाउन कोशिस गर्दछ
Bonn COP23 विशेष, के यो मौसम शिखर छोडियो
संयुक्त राज्य अमेरिकाले सीओपी २ at मा घोषणा गर्‍यो कि उसले पेरिस सम्झौता छोड्दैछ जबकि ग्रीन हाउस ग्यासहरू निरन्तर बढिरहेको छ।
हाम्रो ईकोलोजिकल पदचिह्न थाहा पाउनु महत्वपूर्ण छ यसलाई दिगो बानीका साथ घटाउन सुरु गर्न, व्यक्तिगत परिणाम प्राप्त गर्न र यसलाई कसरी काम गर्दछ भन्ने कुरा बुझ्न।
वायु प्रदूषण एक वातावरणीय समस्या हो जुन ठूला शहरहरूमा मानिसहरुको स्वास्थ्यलाई बढ्दो प्रभाव पार्दछ। यसको बिरूद्ध के गरिन्छ?
२०१ the को तुलनामा अमेजनमा वन फँडानी २ 28% ले कम छ
यी दिन बोन क्लाइमेट समिट (COP23) आयोजना भइरहेको छ र अमेजनमा वन फँडानीको बारेमा कुरा गरिएको छ। दृष्टिकोण कस्तो छ?
कफी क्याप्सूल एक प्रकारको फोहोर हो जुन बिभिन्न प्रकारको कन्टेनरमा स be्कलन गर्नुपर्दछ। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ कसरी पुन: साइकल गरिन्छ?
स्पेनका चराहरूले मानवले भोगेका असरहरू भोगिरहेका छन् र गिरावटमा छन्। यस्तो अवस्था कस्तो छ?
यहाँ हामी दिगो विकास के हो, यसको विशेषताहरु, उत्पत्ति र प्रकारहरू वर्णन गर्छौं। के तपाइँ यसको बारे सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
वातावरणीय स्थिरताको लक्ष्य र मापन पत्ता लगाउनुहोस् र किन ती आजको विश्वमा यत्तिको महत्त्वपूर्ण छन्
स्पेनमा प्रकृति पर्यटन बढ्छ
२०० and र २०१ between को बीचमा स्पेनमा प्रकृति पर्यटन 2009२% ले वृद्धि भएको छ। प्रकृति पर्यटन मा यो वृद्धि दिगो छ?
टर्मिनोलजी र गल्तीहरू हामी जब वाइन्डफायरको बारेमा कुरा गर्छौं
जब हामी ज forest्गलको आगोको बारेमा कुरा गर्छौं हामी शब्दावलीमा केही गल्ती गर्छौं। के तपाईं जान्न चाहनुहुन्छ कि ती असफलताहरू के हुन्?
तिनीहरू आगो जलाउन रोक्नको लागि साधनहरू बढाउन सोध्छन्
अस्टुरियस, क्यास्टिला वाई लियोन र गलिसियामा भर्खरैका दिनमा घटेको ज fire्गलमा आगो लागेको चार जनाले यसबारे पहिल्यै दावी गरिसकेका छन।
मौसम परिवर्तन र ऊर्जा संक्रमण कानूनको आधारको रूपमा, धेरै संस्थाहरूले प्रदूषण गर्ने प्रविधिहरूको लागि कडा कर तिर्न आग्रह गर्छन्।
फ्लेमिing्गोहरू भ्याउटलैंडको पानीलाई शुद्ध पार्न सक्षम छन्
फ्लेमिing्गो विचित्र तरिकामा हिंड्छन् र उनीहरूको मलमूत्रसँगसँगै, तिनीहरूले नमकीन भिजे मैदानहरूमा जैविक पदार्थहरूको माइक्रोबियल शुद्धिकरण गर्न मद्दत गर्छन्।
रिसाइक्लिंग कन्टेनरहरूको र of्गको अर्थ र हामीले फोहोरलाई छुट्ट्याउन कसरी प्रयोग गर्नुपर्दछ।
हाइड्रोपोनिक्स एक विधि हो जुन बढेको बिरूवाहरूको लागि समाधानको प्रयोग समावेश गर्दछ। के तपाइँ हाइड्रोपोनिक्सको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ?
२०१ Spain मा स्पेनले आफ्नो हवाको गुणस्तर सुधार गर्दछ
राम्रो समाचारको एक सानो टुक्रा भनेको यो हो कि स्पेनमा सामान्य हवाको गुणस्तर गत वर्षको तुलनामा २०१ 2016 मा थोरै सुधार भएको थियो।
सेर्डोला, जंगली सुअर र भियतनामी सुअर बीचको क्रसको कारण आक्रामक खतरा
आज हामी "पिगलेट" को बारेमा कुरा गर्न जाँदैछौं। यो भियतनामी सुँगुर र जंगली डुक्कर बीचको क्रस हो, जुन एक प्रमुख वातावरणीय समस्या भएको छ।
हामी रिसायकल गर्न सरल र सजिलो इशाराहरू बनाउन सक्छौं र यसलाई नबुझी हामी आफ्नो ग्रहलाई सहयोग गर्दैछौं। के तपाई जान्न चाहानुहुन्छ ती इशाराहरू के हुन्?
समुद्रमा लगभग १२ करोड टन प्लास्टिकको फोहोर छ। यी प्लास्टिकलाई के हुन्छ र उनीहरूमा के प्रभावहरू हुन्छन्?
सबै शहरी वातावरण र ठूला शहरहरूमा आवाज प्रदूषण छ। यसबाट बच्न के गर्न सकिन्छ?
समुद्रलाई दोहन गर्न नवीकरणीय उर्जा मध्ये एक तरंग उर्जा हो, जसलाई तरंग उर्जा पनि भनिन्छ।
क्यानरी टापुहरूले विशाल छेपारोमा कटौतीको अनुभव गरिरहेको छ। के तपाई लार्क्समा हुने कमीको प्रभावको बारेमा बढी जान्न चाहानुहुन्छ?
ज्वार ऊर्जा वा ज्वार ऊर्जा
यो कसरी काम गर्दछ जान्नुहोस् र ज्वलन्त उर्जा र यसको पावर प्लान्टहरूको प्राविधिक सुविधाहरू। प्रविधिको एक चमत्कार
बालुवा बढ्दो सीमित र मूल्यवान संसाधन हो, किनकि यो मरुभूमिको कारण हुने क्षरणको उच्च दरहरूको कारण अधिक दुर हो।
इकोस्फीयरलाई ग्रह पृथ्वीको ग्लोबल इकोसिस्टमको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। के तपाई इकोस्फीयरको बारेमा सबै जान्न चाहानुहुन्छ? यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
तपाईंले किन प्रयोग गरिएको तेल रिसायकल गर्नुपर्छ?
केवल एक लिटर प्रयोग गरिएको तेल लगभग १,००० लिटर पिउने पानी दूषित गर्न सक्षम छ। त्यसकारण, प्रयोग गरिएको तेल रिसायकल गर्न महत्त्वपूर्ण छ।
पानी eutrophication एक प्रकारको प्रदूषण हो। प्राकृतिक ईकोसिस्टममा पानी eutrophication के समस्याहरू हुन्छन्?
सूक्ष्म पानी का उपयोग पानीको विघटनको लागि
पानीको प्रदूषण औद्योगिक गतिविधि को एक मुख्य परिणाम हो। माइक्रोएल्गेका साथ उनीहरूलाई डिकोन्टाइनमेन्ट गर्न सकिन्छ।
शहरहरूले केवल पृथ्वीको सम्पूर्ण क्षेत्रको २% ओगट्छन्। जे होस्, तिनीहरू उत्पादन सबै ऊर्जा को 2% खपत।
सामान्यतया, पानी प्रदूषण विभिन्न प्रदूषण गर्ने पदार्थहरूको पानी स्रोतहरूमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष निर्वहनको माध्यमबाट हुन्छ।
आज चीनमा सम्पूर्ण इलेक्ट्रिक भन्दा बढी इलेक्ट्रिक कारहरू बिक्री गरिन्छ। सबै प्रकारका इलेक्ट्रिक सवारीहरूमा वास्तविक बूम छ।
एउटा अध्ययनले प्रकृतिको आधारभूत जोखिमहरू बारे सामान्य जनसंख्याले देखाइएको "चिन्ताजनक" अज्ञानता देखाउँदछ
आर्कटिक permafrost पग्लिरहेछ
मानव र ग्लोबल वार्मिंगको प्रभावमा, पर्माफ्रस्ट पग्लिरहेछ र क्रमिक रूपमा मीथेन ग्यास रिहा गर्दैछ।
बायोटप के हो?
बायोटप स्थान हो जुन वनस्पति र जीव जन्तुहरूको जनसंख्यालाई सँभाल्छ। तिनीहरुको बारे र इकोसिस्टमसँगको सम्बन्धको बारेमा सबै जान्न, यहाँ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
वातावरणीय समस्याहरूले नवीकरणीय उर्जा स्रोतहरूलाई असर गर्दछ। हामी व्याख्या गर्दछौं कसरी यी समस्याहरूले दिगो ऊर्जाको प्रयोगमा प्रभाव पार्दछ
डोआना आगोले लिंक्स दायरा क्षेत्रहरूलाई क्षति पुर्‍याएको छ
आगोले तीन महिला Iberian लिन्क्स को दायरा को केहि क्षेत्रहरु लाई प्रभावित गरेको छ। यी क्षेत्रहरू महिलाहरूले शिकारको शिकार गर्न प्रयोग गर्दछन्।
डोआना राष्ट्रिय र प्राकृतिक पार्क
डोआना १ 1999 XNUMX in मा त्यस्तै घोषणा गरिएको थियो र दुवै राष्ट्रिय निकुञ्ज र प्राकृतिक पार्क संरक्षित प्राकृतिक ठाउँहरूको सूचीमा समावेश थिए।
The%% स्पेनिश जनसंख्या वायु प्रदूषणको चपेटामा छ
एक वायु गुणस्तरको रिपोर्टले अनुमान गर्यो कि २०१ nearly मा करीव 44 2016 करोड मानिसहरु प्रदूषणको स्तरमा परेका थिए।
पानी प्रदूषण को समस्या
पानी प्रदूषण धेरै जनसंख्या द्वारा सामना को एक ठूलो समस्या हो, फोहोर, फैलिएको, कीटनाशक र थोरै नियमन केहि कारणहरु छन्।
जंगलमा भएको आगोको परिणाम
वन आगोले प्राकृतिक इकोसिस्टमलाई गम्भीर क्षति पुर्‍याउँछ र आर्थिक र सामाजिक क्षति। उनीहरूको नतिजा कस्तो हुन्छ?
हेजहोगहरू Alhambra मा पुन: स्थापित छन्
कम्तिमा सात बर्षदेखि, अल्हाम्ब्राको वरिपरिको क्षेत्रमा हेजहोगहरूको अस्तित्वको कुनै प्रमाण छैन, तर यो सामान्य हुनेछ।
पोसिडोनिया समुद्रिका तटमा यसको भूमिकाका लागि परिचित छ। जे होस्, हामीलाई थाहा छैन किन उनीहरूलाई ठीक राख्नु पर्छ। यसलाई यहाँ जान्नुहोस्।
स्पेनमा प्रत्येक दिन मरुभूमि बढ्दै जान्छ
स्पेनमा, नराम्रो योजना र स्थानिक योजनाले विनाशकारी मार्गमा मरुभूमिलाई अगाडि बढाइरहेको छ।
क्योटो प्रोटोकोलको बारेमा सबै
वातावरणको सबैभन्दा ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशका नेताहरूले उनीहरूलाई कम गर्न र जलवायु परिवर्तनबाट बच्नका लागि तथाकथित क्योटो प्रोटोकल सिर्जना गर्छन्।
अझै नवीकरणीय उर्जा प्रयोग गरिरहनु भएको छ? हामी तपाईंलाई6सम्वन्धित कारणहरू दिन्छौं जीवाश्म ईन्धनको प्रयोग रोक्न र दिगो ऊर्जा स्रोतहरूमा छलांग बनाउन।
वनस्पतिको मौसमी चक्रको माध्यमबाट यो अवलोकन गर्न सकिन्छ कि कसरी धन्यवाद, पृथ्वीले "सास फेर्छ" र हामीलाई अक्सिजन र खाना प्रदान गर्न सक्छ।
जर्मन समूह जुवीको वित्तीय क्षमता प्रमाणित भएपछि सीएनएमसीले मुला फोटोभोल्टिक सौर प्लान्टको मेगाप्रोजेक्टलाई अनुमोदन गरेको छ।
विश्व पर्यावरण दिवसको महत्त्व
हामी विश्व वातावरण दिवस मनाउँछौं जसमा सबैलाई वातावरण संरक्षण र संरक्षणको महत्त्वको सम्झना गराईन्छ
हामी जलवायु परिवर्तन र हामीले सामना गर्ने अन्य चुनौतिहरू रोक्नको लागि उपकरणहरू प्रयोग गर्ने पहिलो पुस्ता हो
एक आधुनिक शहरले त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई संतुष्ट गर्न र वातावरणसँग अनुकूल हुन आवश्यक पर्ने सुविधाहरू के हो पत्ता लगाउनुहोस्
तपाईले प्रयोग गरिरहनु भएको बल्बका प्रकारहरूमा निर्भर गर्दै तपाई + वा - ऊर्जा उपभोग गर्न सक्नुहुन्छ। बल्बका प्रकारहरू, तिनीहरूको शक्ति, खपत, अवधि, मूल्य र प्रचलनहरू।
यस प्रकारले फोहोरलाई डम्पि the गर्ने वातावरणमा प्रभाव पार्छ। हामी तपाईंलाई बताउँछौं कि फोहोरले हावा, माटो र पानीले हामी उपभोग गर्छौं।
एयरोथर्मलले हावामा निहित उर्जाको फाइदा लिन्छ, यो निरन्तर नवीकरणमा हुन्छ, हावालाई ऊर्जाको एक अपारणीय स्रोतमा परिणत गर्दछ।
चेर्नोबिल तीस बर्ष पछि फेरि जीवित छ
केही महिना अघि यो पत्ता लागेको थियो कि चेर्नोबिल जोनमा विपत्ति भएको थियो र जीवन भरिएको छ।
EARTH DAY 2018 अप्रिल २२ हुनेछ
पृथ्वी दिवस २०१ every प्रत्येक वर्ष जस्तै अप्रिल २२ मा मनाइनेछ। १ 2018 .० यो घटना भएको पहिलो वर्ष थियो। नवीकरणीय उर्जा विकास
प्लास्टिकहरू डिग्रेड गर्न सक्षम गँडाहरू
वैज्ञानिकहरूले पत्ता लगाए कि क्याटरपिलरको एउटा प्रजाति जो जैविक दृष्टिबाट प्लास्टिकमा रहेको पॉलीथीन गिराउन सक्षम छ।
बेलायतले १ coal135 वर्ष पछि विद्युत् उत्पादन गर्न कोइलाको प्रयोग गर्न रोक्दछ
कोइलाले बिजुली उत्पादन गर्न प्रयोग गर्ने यो पहिलो राष्ट्र थियो, १ 135 वर्ष पछि, यो पहिलो हो ...
बैंकहरूले हरित launchण सुरु गर्छन्
वित्तीय संस्थाले भर्खरै यसको ग्रीन लोन प्रस्तुत गरेको छ, उत्पाद "नवीकरणीय उर्जामा पहुँच पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ सिर्जना गरिएको"
अप्रिल १,, अन्तर्राष्ट्रिय साइकल दिवस हो। साइकल चालकहरूको बचाव गर्नका लागि प्रसिद्ध दिन र विकल्पहरू प्रदान गर्न संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुहोस्
फिनल्यान्डले २०2030० भन्दा पहिले बिजुली उत्पादन गर्न कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनेछ
फिनिश सरकारले २०2030० सम्ममा बिजुली उत्पादनका लागि कोइलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन रणनीतिक उर्जा क्षेत्रको योजना पेश गर्‍यो
वन फँडानीको नतिजा
वन समस्याले के कारण बनाउँछ? यी वन गतिविधिले वन र जung्गलको विनाश गर्ने गतिविधिको कारण वन फँडानीको परिणाम हो
स्पेन, नवीकरणीय क्षेत्र मा एक नराम्रो उदाहरण
विश्वव्यापी उर्जा प्रणालीको सामान्यीकरण परिवर्तन, नवीकरणीय क्षेत्रको विकास, जीवाश्म सामग्रीको प्रयोगका परिणामहरू।
मौसम परिवर्तनले जीवको बिभिन्न विकासवादी पथलाई परिमार्जन गरेर प्राकृतिक चयनलाई पनि असर गर्न सक्छ।
CO2 उत्सर्जन कार्बन चक्रलाई असर गर्ने शुष्क क्षेत्रहरूमा पत्ता लगाइन्छ
भूमिगत भेन्टिलेसन प्रक्रियाले चरम सीओ २ उत्सर्जनको कारण गर्दछ, जसले नकारात्मक रूपमा ग्लोबल वार्मिंगलाई असर गर्दछ।
Radon ग्यास र यसले हाम्रो स्वास्थ्यमा समस्याहरू निम्त्याउँछ
क्यान्डरको साथ रडोन ग्यासको सम्बन्ध पत्ता लगाउनुहोस् र यदि तपाईं बस्नुहुन्छ जहाँ RADON emanations बाट खतरा छ।
स्कूल फार्महरू के हुन् र उनीहरू केका लागि हुन्?
स्कूल फार्महरूमा बच्चाहरूको प्रकृतिसँग सम्पर्क हुन्छ। बच्चाको लागि प्रकृतिबाट आनन्द लिन कत्तिको महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ?
मांसाहारी बोटहरूले कसरी मासुको लागि आफ्नो स्वाद प्राप्त गर्‍यो?
जीवित चीजहरूको विकास र विकासले मासु खान आवश्यक छ। मांसाहारी बोटहरूले कसरी मासुको लागि आफ्नो स्वाद प्राप्त गर्‍यो?
पनामा बे वेटलैंड शहरी प्रदूषणका कारण गिरावट आएको छ
पानामा बे वेटलैंडले गम्भिर प्रदूषण र गिरावटको समस्याहरूको सामना गर्दछ उदासिन शहरी विकासको कारण।
एसियन भेंडी एक आक्रामक प्रजाति हो र हाम्रो मौरीलाई असर गर्छ
यो आक्रामक प्रजातिले हाम्रो मह मौरीका आदिवासी जनजातिलाई धम्की दिँदैछ। यी भेंडालाई के हुन्छ?
जाइलल्ला फास्टिडिओसा, कीराले बलिएरिक टापुहरूमा आक्रमण गरिरहेछ
युरोपमा बैक्टीरियम जाइल्ला फेस्टिडिओसा एकदम खतरनाक बोटबिरुवाको कीट भएको छ। यसको असंख्य क्षतिहरूले हजारौं भद्राक्ष रूखहरू काट्न बाध्य पारेको छ।
मौसम परिवर्तनको लड्न रूख: किरी
संसारमा अस्तित्वमा रहेका सबै रूखका प्रजातिहरूमध्ये, त्यहाँ एक विशेष किसिमले छ जसले हामीलाई जलवायु परिवर्तन विरूद्ध लड्न मद्दत गर्दछ। यो किरी रूख हो।
चीनले अरबौं डलर नवीकरणीय उर्जा योजनालाई अनुमोदन गर्‍यो
चीनले देशभर नवीकरणीय उर्जा अनुसन्धान र विकासलाई प्रबर्द्धन गर्न मिलियन मिलियन डलरको योजना घोषणा गर्‍यो।
कुन निर्माण सामग्रीहरू अधिक वातावरणीय अनुकूल छन् र हामी यो कसरी जान्दछौं?
बालुवाको प्रत्येक अनाज गणना गरिन्छ जब स्रोतको बचत गर्ने, प्रदुषणबाट जोगिन, आदिको कुरा आउँछ। यसका लागि हामी इकोलोजिकल सामग्री प्रयोग गर्दछौं।
पोडेमोस र PSOE ले सलामान्कामा युरेनियम खानीको उद्घाटन अस्वीकार गर्दछन्
यो retortillo नगरपालिका मा Campo Charro को सलामान्का क्षेत्र मा यूरेनियम निकाल्न एक खान निर्माण गर्ने उद्देश्यले हो।
वन्यजन्तुहरूको लागि "हरियो" पुलहरू निर्माण गर्दै
तथाकथित इकोलोजिकल कोरिडोरहरू ती क्षेत्रहरू हुन् जुन एक बसोबासलाई अर्को ठाउँसँग जोड्दछन् र जहाँ प्रजातिहरूले ठाउँ परिवर्तन गर्न सक्दछन् र राम्रोसँग सार्न सक्छन्।
स्पेनमा सबैभन्दा धेरै रिसायकल गर्ने स्वायत्त समुदायहरू
२०१ 2014 मा स्वायत्त समुदायहरू जसले सबैभन्दा बढी पुनर्चक्रण गर्थे तिनीहरू अन्डालुसिया थिए, त्यसपछि क्याटालोनिया र म्याड्रिडको समुदाय।
म्याड्रिडमा एक नयाँ म्याड्रिलिया रिसायकल गर्नुहोस्
म्याड्रिड सिटी काउन्सिल र इकोविड्रियोले गिलासलाई रिसायकल गर्न र यसको महत्वका बारे मानिसहरूलाई सचेत गराउन नयाँ अभियान सुरू गर्यो।
२०१० र २०१ between बीच स्पेनमा ग्यास उत्सर्जन घटाइएको थियो
स्पेनमा २०१० र २०१ between बीच ग्रीन हाउस ग्यास उत्सर्जन 2010..2014% ले घटेको थियो। यो के हो?
वातावरणविद्हरूले म्याड्रिडमा दुई नयाँ इनसिनेरेटरको निर्माणलाई अस्वीकार गरे
म्याड्रिडमा, फोहरलाई उपचार गर्न दुई नयाँ इन्सिनेटरहरू निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ। धेरै वातावरणीय समूहहरूले अस्वीकार गरे।
किन मौरीहरू मानिसका लागि यति महत्वपूर्ण छन्?
मानव माहुरीको बेपत्ताको कारण छ। हाम्रो बाँच्नको लागि यि धेरै महत्त्वपूर्ण फंक्शन छ, यो के हो?
वायु प्रदूषण सीमा परिमार्जन गरिनेछ
युरोपेली संसदले छवटा वायु प्रदूषकको राष्ट्रिय उत्सर्जन घटाउनका लागि नियममा संशोधन अनुमोदन गर्ने छ।
प्रजातिहरूको संरक्षणका लागि खतराको कोटीहरू
विलुप्त हुने खतरामा रहेका वनस्पति र जीवजन्तुहरू तिनीहरूको संरक्षणको लागि खतराको वर्गमा राखिएका छन्।
आर्थिक वृद्धि वा वातावरणीय स्थिरता?
वैज्ञानिकहरूले एउटा अध्ययन गरे जुन स्पेनिश जनसंख्याको एक तिहाई जनसंख्याले दिगोपनको लागि आर्थिक वृद्धिलाई बेवास्ता गर्न रुचाउँछ भनेर पुष्टि गर्दछ
भविष्यका शहरहरूको लागि दिगो किहरू
भविष्यका शहरहरूमा अर्थव्यवस्था र समाज हुनुपर्दछ नयाँ र नवीन प्रविधि र स्थिरताको संयोजनमा।
तिनीहरूले तेल फैलिएमा नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावको निन्दा गर्छन्
तिनीहरूले निकासी क्षेत्रको नजिक बसोबास गर्ने जनसंख्यामा तेल खस्दाका कारण स्वास्थ्य असरको बारेमा गुनासो गरेका छन।
जैव ईन्धन र कार्बन डाइअक्साइडको ठूलो विवाद
जलेको बायोफ्युएलले उत्सर्जित CO2 द्वारा प्राप्त गर्मीको मात्रा बिरूवाहरू द्वारा लिईएको CO2 को मात्रासँग सन्तुलनमा हुँदैन।
अचिम स्टीनर: स्पेन नवीकरणीय उर्जामा अग्रसर हुने थियो यदि यो आर्थिक संकटका लागि नभएको भए
यूएनईपीका पूर्व कार्यकारी निर्देशक अचिम स्टीनरका अनुसार स्पेन स it्कट नभएको भए विश्वव्यापी नवीकरणीय उर्जामा अग्रसर हुने थियो।
ग्राफीन नानोरोबोटहरू प्रयोग गरेर पानीलाई रोक्नुहोस्
चुम्बकीय क्षेत्र द्वारा निर्देशित, सानो graphene ट्यूबहरू प्रदूषित पानीमा भंग भारी धातुहरू भण्डार गर्न सक्दछ। बीचमा ...
प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध १ जून सम्म ढिला भयो
यो सुरुमा जनवरी १ को लागि निर्धारित गरिएको थियो। त्यसपछि यो मार्च २ postp मा स्थगित गरियो। यो अन्ततः बाट हुनेछ ...
PaperLab, कागज रिसाइक्लि office अफिस पेपरको लागि एक मेसिन
एप्सन कम्पनीहरु को लागी निर्धारित कागजात को रीसायकल गर्न एक मेशीन को व्यावसायीकरण गर्न जाँदैछ। PaperLab विभिन्न पाना ढाँचाहरू उत्पादन गर्नमा सक्षम छ र अत्तरको कागजसमेत।
भूमध्य प्लास्टिक फोहरलाई कपडामा पुन: साइकल गरियो
२०० स्पेनी माछा मार्ने डु boats्गाले भूमध्यसागरमा प्लास्टिकको फोहोर संकलन गर्न थालेका छन्। एउटा म्याड्रिड कारखानाले कपडाको ब्रान्डको लागि कपडा बनाउन यस फोहोरको रिसाइक्लि undert गर्न गइरहेको छ।
वायु प्रदूषण प्रिन्टर मसीमा परिर्वतन भयो
एक शोधकर्ताले भर्खर एक सहज सक्सन र फिल्टरेशन प्रणालीको विकास गरेको छ, जसको धन्यवादले उसले वायुमण्डलीय प्रदूषणबाट कार्बन काख निकाल्ने र त्यसलाई प्रिन्टर मसीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्दछ।
एरोसोलहरू वातावरणमा उपस्थित साना कणहरू हुन्। तिनीहरू बादलको गठनका लागि जिम्मेवार छन् र एकै समयमा ग्रीनहाउस प्रभाव र मौसम तापक्रममा योगदान पुर्‍याउँछन्।
प्रति वर्ष एक अरब रूख रोप्न क्षमता संग ड्रोन
लक्ष्य भनेको एक ड्रोन प्रणालीको साथ एक दिनमा ,36.000 XNUMX,००० बीउ रोप्ने हो जुन दुर्गम र दुर्गम क्षेत्रमा पुग्न सक्छ
पेरिस प्रदूषण तम्बाकूको धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक छ
डिसेम्बर १,, २०१ 13 मा, पेरिसका सडकहरू २० वर्ग वर्ग मिटर कोठा जत्तिकै प्रदूषित थिए जसमा आठ धूम्रपान गर्नेहरू थिए।
नासाले पृथ्वीमा १ बर्षको लागि CO2 चक्रको बारेमा भिडियो जारी गरेको छ। २०० data डाटा
विश्वको प्लास्टिकको उत्पादन हरेक बर्ष बढ्छ (२ 288 करोड टन, जुन भनेको २०१२ मा २.2,9% भन्दा बढी) जनसंख्याको बृद्धिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धमा र यसको फलस्वरूप फोहोरको मात्रामा बृद्धि हुन्छ।
अमेजनका भारतीय योद्धाहरू 'शिकार' शिकारी जंगलको भविष्यको लागि लड़ाईमा
अमेजनमा त्यहाँ धेरै जनजातिहरू छन् जुन कापुरका योद्धाहरू जंगलको भविष्यको लागि लडिरहे
कागज र गत्ता काठबाट बनेका छन्, कागज र गत्ता खपतको अधिक मात्रा, र ज of्गलको विनाश अधिक। कागज र कार्डबोर्डको फाइदा यो हो कि यो पुन: प्राप्ति गर्न सकिन्छ र अन्य कागजातहरू र कार्डबोर्ड बनाउन पुन: साइकल गर्नुहोस्।
टुन्ड्रा कार्बन उत्सर्जनको स्रोत बन्न सक्छ
टुन्ड्रा एक उत्कृष्ट कार्बन पूल हो। कमसेकम यो थियो।
जून १ 1992 XNUMX २ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आयोजना गरेको पहिलो अर्थ शिखर सम्मेलनमा "दिगो विकास" भन्ने शब्द समेटियो।
किन कारणहरू सागरले यसको विपत्ति गुमाउँछ
दक्षिण प्रशान्तमा अवस्थित यस क्षेत्रले विश्वव्यापी महासागरको ठूलो क्षतिमा ठूलो योगदान पुर्‍याउँछ।
खरानी उर्जा प्राय: कुनै उत्पादको वातावरणीय प्रभाव प्रदर्शन गर्न कुरा गरिन्छ।
सोल्वाटेन एक मानवीय जल उपचार प्रणाली हो जुन पानीलाई शुद्ध बनाउन र यसलाई पिउन योग्य बनाउनको लागि डिजाइन गरिएको हो।
प्रकृतिमा जीवनको फोहोर
प्रकृतिमा फोहोरलाई बेवास्ता गर्दा धेरै परिणामहरू हुन्छन् जुन हामी कसरी मापन गर्ने भनेर जान्दैनौं ... र यो यो हो कि तिनीहरू सामान्यतया उनीहरूले नष्ट नगरुन्जेल हामीले सोचेभन्दा लामो समयसम्म रहन्छन्।
पानी कम प्रदूषित बनाउनुहोस्
यद्यपि यो सत्य हो कि उद्योग वा किसानहरू प्रायः पानी प्रदूषित गरेको आरोप लगाइन्छन्, निजी प्रयोगकर्ताहरूको पनि उनीहरूको जिम्मेवारीको अंश हुन्छ।
डिजाइन वातावरण अनुकूल अनुकूल उत्पादनहरु मा बढ्दो चासो छ। यसको एउटा उदाहरण हो ...
१००% बायोडिग्रेडेबल कप एक वास्तविकता हुन्
पारिस्थितिक कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नु महत्त्वपूर्ण छ
सबै तेल निष्कर्षण समान छैन किनकि केही क्षेत्रमा यो सजिलो र थोरै कम छ ...
अपरेटि systems प्रणालीहरू सबै एकै हुँदैनन्
फेल्ट एक पारिस्थितिक सामग्री हो जुन बिभिन्न उत्पादनहरूको निर्माणलाई अनुमति दिन्छ
साइकल चालकहरूको लागि कार्डबोर्डबाट बनेको एक पारिस्थितिक हेलमेट छ
प्लास्टिक र प्लास्टिकको बारेमा तथ्यहरू
डिस्पोजेबल तर ईकोलोजिकल कटलरी
डिस्पोजेबल कटलरी पनि पर्यावरणीय हुन सक्छ
डेनोनले यसको योगर्टमा बायोप्लास्टिक प्रयोग गर्दछ
डेनोनले यसको केहि उत्पादनहरूमा बायोप्लास्टिक प्रयोग गर्दछ
ईटहरूले CO2 क्याप्चर गर्दछ
कम वातावरणीय प्रभाव ईंटहरू
उद्योगमा नरिवल र यसको अनुप्रयोगहरू
नरिवल फाइबरले केहि प्रयोगहरूमा सिंथेटिक फाइबरहरू बदल्दैछ
पर्यावरणीय उत्पादनहरू एल्युमिनियम ओपनरहरूमा आधारित
सोडामा आधारित फेशनेबल इको-मैत्री उत्पादनहरू ओपनरहरू गर्न सक्छन्
Re कारण किन समुदायले रिसायकल गर्नुपर्दछ
त्यहाँ धेरै कारणहरू छन् जुन समुदायले रीसायकल गर्नुपर्दछ
नाइजेरियामा तेल कम्पनीहरूले प्रदूषणको कारणले यसलाई सफा गर्न years० बर्ष लाग्न सक्दछ
नाइजेरिया र तेल शोषणको वातावरणीय परिणामहरू
मौसम परिवर्तनले युगान्डामा चिया उब्जाइरहेको छ
युगान्डान चियाको खेती जोखिममा मौसम परिवर्तनले खडेरीको कारणले आएको छ
आज कार्पेट जस्ता पारिस्थितिक घर उत्पादनहरू किन्न सम्भव छ
हाल धेरै कम्पनीहरू र ब्रान्डहरू छन् जसले ब्यागहरू र अन्य उत्पादनहरू बनाउन टायरलाई रीसायकल गर्दछ
बाँस फर्निचर घर वा कार्यालय को लागी एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प हो
जैविक उत्पादनहरू किन महँगो छन्?
जैविक उत्पादनहरू र तिनीहरूको मूल्य
वातावरणबाट सीओ २ लाई ग्रहण गर्न रूखहरूको क्षमता धेरै महत्त्वपूर्ण छ
फ्रान्सेली ब्रान्ड FYE ईकोलजिकल फुटवेयर प्रदान गर्दछ
वर्षको अन्त्यमा, मरिडामा रिसाइक्लि plant प्लान्टको निर्माण कार्य सम्पन्न हुनेछ
जब हामीले खाना पकाउने तेल वा कारको तेल सि the्कमा तल खसाल्छौं, हामी समुद्र र समुद्रहरूलाई हानी गर्दछौं किनभने यसले जलरोधक फिल्म बनाउँछ जुन सूर्यको पारित गर्न र अक्सिजनको आवागमनलाई समुद्री जीवनबाट अवरोध गर्दछ।
धेरै देशहरूमा वातावरण र व्यक्तिगत स्वच्छता उत्पादनहरूमा एउटा सर्वेक्षण गरिएको थियो
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रहरूमा जलाशयहरूले प्रदूषण उत्पन्न गर्छन्
लक्जरी क्रूज प्रदूषित र धेरै ऊर्जा बर्बाद
खेलौना उद्योग र वन फँडानी
खेलौना उद्योग इन्डोनेसियाको वन फँडानीमा जटिल छ
बच्चा डायपर रिसायकल गर्न र बायोग्यास उत्पादन गर्न परियोजना
प्लास्टिकको फोहोरले ईन्धन उत्पादन गर्न सम्भव बनाउँदछ
खाद्य र biodegradable कप वातावरण को ख्याल गर्न
कागज बनाउन पशु मलमूत्र
पशु उत्सर्जन कागज बनाउनका लागि कच्चा माल हुन सक्छ
काठ ब्रेसलेट वाच
यदि हामी वातावरणीय हेरचाह गर्न चाहन्छौं भने इकोलोजिकल वाचहरू एक उत्तम विकल्प हो
जैविक फोहोरले राम्रो घर बनाएको कम्पोस्ट बनाउन सक्दछ
जैविक फोहोर कम्पोस्ट वा कम्पोस्टमा पुन: साईकल गर्न सकिन्छ हाम्रो बिरुवाहरूको लागि मलको रूपमा प्रयोग गर्न। साना कम्पोस्टरहरू बजारमा बेचिन्छन् जुनसँग, साधारण तरिकाले हामी कम्पोस्ट उत्पादन गर्न सक्छौं।
पुन: पुन: परीक्षण कागज पुस्तकहरू वातावरण अनुकूल छन्
पुरुषहरू दैनिक जीवनमा महिलाहरू भन्दा बढी उर्जा खान्छन् र वातावरणमा अधिक प्रभाव गर्दछन्
भर्खरको अनुसन्धानले महिलाले पुरुष भन्दा कम उर्जा खान्छन् र उनीहरूको दैनिक क्रियाकलापले वातावरणमा कम प्रभाव पार्छ भनेर पत्ता लगाएको छ।
NH होटल्स रिसाइक्लि to गर्न प्रतिबद्ध छ
एनएच यसको सुविधाहरूमा रिसाइकल गर्न प्रतिबद्ध छ
काठका घरहरू एक पारिस्थितिक विकल्प हुन् किनकि यो एक नवीकरणीय सामग्री हो। यो उत्कृष्ट इन्सुलेट प्रदर्शन, सुख्खा र कुशल निर्माण छ।
मुद्रित पुस्तकहरूको उत्पादन प्रक्रियाबाट हुन्छ जसले वातावरणलाई प्रदूषित गर्दछ र यसको उत्पादनको लागि वर्षमा लाखौं रूखहरू काट्नु आवश्यक छ। इलेक्ट्रोनिक पुस्तक e-book हरियो विकल्प हो।
विश्वका शहरहरू एलईडी बत्तीहरू द्वारा उज्यालो
विश्वका शहर र शहरहरूले एलईडी बत्तीहरू सार्वजनिक प्रकाशमा समाहित गरेका छन् किनकि यसले महत्त्वपूर्ण ऊर्जा बचत उत्पादन गर्दछ र सीओ २ उत्सर्जन कम गर्दछ।
हामी सफा पोइन्टहरूमा के लिन सक्छौं
सफ्ट प्वाइन्टहरू स्पेनका सबै शहरहरूमा वितरण गरिएका स्थानहरू हुन् जहाँ तपाईं फोहोर लिन सक्नुहुन्छ जुन कन्टेनरहरूमा छोड्नुहुन्न किनभने यो वातावरणको लागि खतरनाक छ।
वर्षा पानी घरका विभिन्न प्रयोगका लागि उपयोगी हुन सक्छ, तपाईंले यसलाई स collect्कलन गर्न र घरमै पिउने पानीको उपभोग घटाउन यसलाई च्यानल बनाउन सक्नुहुन्छ, वातावरणलाई मद्दत गर्नुहोस्।
विकसित देशहरूको पारिस्थितिक debtण
विकसित देशहरूमा पर्यावरणीय veryण धेरै नै छ
कागजमा प्रिन्ट गर्नु वातावरणको लागि चिन्ताको विषय बनेको छ। बचत अभियानको अतिरिक्त, कम्पनीहरूले टेक्नोलोजीहरू विकास गर्न खोजिरहेका छन् जुन उनीहरूलाई कम कागज र मसी प्रयोग गर्न अनुमति दिन्छ।
पारिस्थितिक होटल: जिम्मेवार पर्यटन विकल्प
हरियो होटेलहरूले केहि योग्य हुनका लागि केहि आवश्यकताहरू पूरा गर्न आवश्यक छ। तिनीहरू जिम्मेवार र दिगो पर्यटन अभ्यास गर्न एक विकल्प हो।
क्यानाडाई गहनाले इको-मैत्री हीराको साथ विवाह ब्यान्डहरू उत्पादन गर्दछ
क्यानाडाली कम्पनी ब्रिलियन्ट अर्थले ईको-मैत्री हीरा, सुन र प्लेटिनमको साथ विवाह ब्यान्ड र सगाईको औठीहरू सिर्जना गर्दछ।
बायोप्लास्टिक भविष्यको लागि पेट्रोलियम-आधारित प्लास्टिक प्रतिस्थापन गर्न एक विकल्प हो
फैशनले इकोलोजीको कारमा सामेल हुन्छ जैविक कपास जस्ता पारिस्थितिक सामग्रीले बनाएको कपडाको टुक्रा बनाउन को लागी स्वास्थ्य, वातावरण र मानव अधिकारको सम्मानमा खेती गरिन्छ।
जलविद्युत शक्ति सुधार कानून हुनेछ
नवीकरणीय उर्जाहरूले स्वच्छ उर्जा उत्पादन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका स्रोतहरू प्रदान गर्दछ
युद्ध र सशस्त्र संघर्षले ठूलो मात्रामा प्रदूषण उत्पादन गर्दछ
युद्ध र सशस्त्र संघर्ष गम्भीर वातावरणीय गिरावट उत्पादन
उपभोक्तावाद र वातावरणीय संकट
उपभोक्तावाद वर्तमान वातावरणीय संकटका लागि जिम्मेवार मध्ये एक हो
एल्गाएन्चर सिस्टम (एभीएस), धेरै मध्ये एक हो
शहरी रूखका प्रजातिहरू र उनीहरू CO2 अवशोषित गर्ने क्षमता
त्यहाँ रूखहरू र बोटबिरुवाहरूका केहि प्रजातिहरू छन् सीओ २ लाई अवशोषित गर्न अधिक क्षमतासहित
के त्यहाँ सबैको लागि पर्याप्त ऊर्जा छ?
त्यहाँ नवीकरणीय स्रोतहरू प्रयोग गरियो भने सबैको लागि पर्याप्त ऊर्जा छ
नवीकरणीय स्रोतहरूको उत्तरदायी शोषण
नवीकरणीय उर्जा स्रोतहरूको शोषणले वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ
यातायातको साधन र CO2
यातायातको साधनहरू विश्वव्यापी रूपमा वायु प्रदूषणको प्रमुख कारणहरू हुन्
समुद्री यातायात र CO2 उत्सर्जन
समुद्री यातायात एक क्षेत्र हो जुन प्रदूषणमा धेरै योगदान पुर्‍याउँछ
वन कटान र CO2 क्याप्चर
वन कटाईले सीओ २ लाई अवशोषित गर्न असमर्थ भएर वातावरणीय स्थिति बिगार्दछ
अन्टार्कटिका र नवीकरणीय उर्जा
जलविद्युत् र मौसम परिवर्तन
मौसम परिवर्तनले विश्वमा जलविद्युत उत्पादनलाई असर गर्न सक्छ
ऊर्जा क्षेत्रमा न्यानो टेक्नोलोजी
धेरै विशेषज्ञहरूका लागि नवीकरणीय उर्जा मात्र नभई ऊर्जा क्षेत्रमा पनि परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ ...
सबै भन्दा राम्रो वातावरण मैत्री टेक्नोलोनी कम्पनीहरु को रैंकिंग
केहि बर्ष सम्म ग्रीनपीसले एक रिपोर्ट उत्पादन गरेको छ जहाँ यसले टेक्नोलोजी कम्पनीहरूको वातावरणीय व्यवहारको आकलन गर्दछ। यसमा ...
पुन: साइकिल सौर मोड्युलहरू वा प्यानलहरू
कुनै पनि उत्पादन जस्तै, फोटोभोल्टिक सौर प्यानलको सीमित उपयोगी जीवन छ। यसको जीवन चक्र को एक औसत छ ...
तेलसँग बहु अनुप्रयोगहरू छन्, एक सबैभन्दा अधिक प्रयोग भएको पालीस्टेरिन फोम, व्यापक रूपमा प्रयोग गरिएको उत्पाद ...
देशहरू र ईकोलोजिकल फुटप्रिन्टहरूको श्रेणीकरण
डब्ल्यूडब्ल्यूएफको बस्ने ग्रह रिपोर्ट रिपोर्ट हो जुन प्रत्येक दुई बर्षमा उत्पादन गरिन्छ जहाँ स्थिति विश्लेषण गरिन्छ ...
नवीकरणीय टेक्नोलोजीमा सबैभन्दा विकास भएका देशहरू
नवीकरणीय उर्जामा आधारित टेक्नोलोजीहरू र प्रविधिहरू विश्वभर फस्टाइरहेका छन्। तर त्यहाँ केहि देशहरू छन् ...
पर्यटन क्षेत्र र नवीकरणीय ऊर्जा
पर्यटन क्षेत्रमा होटलहरू, होस्टलहरू, यातायातको साधनहरू, पदयात्रा र प्रकृतिमा गतिविधिहरू आदि समावेश छन्। यो क्षेत्र हो ...
कार्बन फुटप्रिन्ट र नवीकरणीय उर्जाहरू
कार्बन पदचिह्न एक व्यक्ति, संगठन, को हरितगृह ग्यास उत्सर्जन मापन गर्न एक उपकरण हो ...
इको भवनहरू र नवीकरणीय उर्जा
विकसित देशहरूमा हरियो भवनहरू बिस्तारै बढ्दै जान्छ। अलि अलि तिनीहरू ती हुन् ...
ऊर्जा संसाधन र आर्थिक विकास
ऊर्जा एक देश वा क्षेत्र मा आर्थिक विकास हासिल गर्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण देखि महत्त्वपूर्ण छ ...
स्पेनिश शहरहरूमा पारिस्थितिक बसहरू
ठूला शहरहरूमा वातावरणीय प्रदूषणको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारकहरू मध्ये सवारी साधनहरूको संचलन हो। स्पेनिश शहरहरू ...
नीलो उर्जाको अवधारणा धेरैलाई धेरै थाहा छैन, तर यसले वैकल्पिक उर्जा स्रोतलाई जनाउँछ ...
बायोग्यास ग्यास उत्पादन गर्ने एक पारिस्थितिक तरीका हो। यो फोहोर वा जैविक पदार्थको अपघटनबाट उत्पादित हुन्छ। यो…
गरीब देशहरू र नवीकरणीय ऊर्जा
विकसित देशहरूमा विकास, निर्माण र सफा र नवीकरणीय उर्जाहरूको प्रयोगमा बूम छ। तर यो ...
टेक्नोलोजी प्रगति र अधिक कुशल र पारिस्थितिक उत्पादनहरू देखा पर्दछ, जस्तै एलईडी बत्तीहरू सहित प्रकाश ...।